Orinasa fanodinana mandeha ho azy - Mpanamboatra andian-dahatsoratra manapaka China
Masinina famonoana cnc karazana gantry
Ny lalamby torolàlana maharitra dia mihamafy amin'ny alàlan'ny fanindriana ny takelaka manohana ny lovia ary mampifandray ny tanany, izay afaka miantoka ny fahamendrehana lavareny sy ny fitovizan'ny lalamby.
Masinina fanapahana plasma cnc karazana gantry
Ny igniter mandeha ho azy sy ny haavon'ny fanilo momba ny fanilo dia azo fidina araka ny filan'ny mpanjifa, miaraka amin'ny fandidiana mety.
Masinina fanapahana plastika cnc 1530
Rafitra fitsaboana vovoka mahazatra, tsy misy setroka sy vovoka intsony rehefa manapaka, amin'izay mahazo aina kokoa amin'ny asany ny mpandraharaha, miala amin'ny fatiantoka ataon'ny mpandraharaha.
Masinina fanapahana plastika cnc 1560
Fanomezana herinaratra plastika mahazatra, fahombiazana tena tsara, tahan'ny tsy fahombiazan'ny ambany, ary milamina kokoa ny saina.1560 cnc plasma fanapahana milina.
1000w 1500w 2000w 3000w milina cnc fibre laser fanapahana
Miaraka amin'ny takelaka vy sy ny fanapahana fantsom-pandrika Pipe Cnc milina fanapahana laser.
Fitaovana fanapahana: vy vy, vy karbonika, vy firaka, varahina, varahina, vy silikika, vy vita amin'ny gavanized, firaka titanium nickel, firaka chromium nikeel, firaka titanium ary fitaovana metaly 2000w Cnc milina fanapahana laser, 3000w Cnc machine laser cutting machine.